QPrompt, Teleprompter loharano malalaka sy malalaka | Ubunlog
QPrompt, Teleprompter loharano malalaka sy malalaka
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny QPrompt isika. Ity dia rindrambaiko Teleprompter matihanina ho an'ny mpamorona horonantsary. Ny interface dia ahafahantsika miara-miasa amin'ny Teleprompters amin'ny takelaka, fianarana, webcam ary finday. Ny fahaiza-manaony miavaka indrindra angamba dia ny fahafahana manao ny lafika mangarahara, izay mahatonga azy ho tsara ho an'ny fihaonambe video.
Ankehitriny, karazan'olona maro no mamorona votoaty video. Avy amin'ny YouTubers ka hatramin'ny mpampianatra any an-tsekoly dia natokana amin'ny famoronana horonan-tsary. Izany dia noho ny zava-misy fa ny mpampiasa amin'izao fotoana izao dia afaka manana firaketana an-tsary sy mpamoaka lahatsoratra hamorona horonan-tsary tsara. Ny teleprompters toa an'i QPrompt dia anisan'ireo fitaovana izay ho hitanay ho azo hamoronana ny lahatsarinay. Ity programa ity dia natsangana miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanamorana ny fampiasana, ny fampisehoana, ny fanaraha-maso tsara ary ny fanohanana amin'ny sehatra..
Ny teleprompters dia mandefa famantarana hita maso na lahatsoratra mihitsy aza mba ahafahan'ny mpandahateny mamaky azy rehefa miteny. Teleprompter lozisialy toy ny eo am-pelatanana, izay azo atao amin'ny fitaovana samihafa. Ny Q ao amin'ny QPrompt dia manondro fa ity programa ity dia noforonina amin'ny alàlan'ny rafitra Qt. Izany rehetra izany dia mahatonga azy ho safidy tsara ho an'ny KDE, fa miasa tsara amin'ny GNOME.
1 Ny toetra ankapoben'ny QPrompt
2 Mametraka QPrompt amin'ny Ubuntu
2.1 Toy ny AppImage
2.2 Toy ny snap
2.3 Toy ny Flatpak
Ny toetra ankapoben'ny QPrompt
Ity programa ity afaka mandeha amin'ny Windows, macOS, Gnu / Linux ary Android.
Miasa toy ny studio, tablette, webcam ary teleprompters an-telefaona.
Hamela antsika apetaho avy amin'ny rindrambaiko hafa Tsisy olana.
Ny programa dia manana fihetsehana ranon-javatra.
Afaka manao izany isika manaova fanovana amin'ny lahatsoratra haseho.
Hanana ny mety hitranga isika mampiasa marika hitsambikina amin'ny ampahany amin'ny script.
Hafatra maro-efijery, miaraka amin'ny dika mitovy tsy miankina.
La mangarahara ambadika Hanampy antsika hahita ny tenantsika na ny mpihaino antsika izany, rehefa manaraka ny andinin-teny isika.
Manana a naorina-in stopwatch. Ny fandaharana dia manombana ny fotoana sisa.
Ahitana koa a famantarana fandrosoana, mba ho fantatsika hoe ohatrinona no sisa.
Azo ampiasaina izy io endrika manan-karena.
Manohana rafitra fanoratana ny fiteny 180 mahery.
Mametraka QPrompt amin'ny Ubuntu
Ireo mpampiasa Ubuntu dia hanana safidy amin'ny mifidiana avy amin'ny rakitra AppImage, Snap ary Flatpak ho an'ny fametrahana.
Azo atao izany alao ny rakitra AppImage avy amin'ny pejy famoahana tetikasa. Azonao atao koa ny mahazo ny kinova farany navoaka androany amin'ny fanoratana ao amin'ny terminal:
Rehefa misintona ny rakitra dia tsy maintsy manome alalana. Izany dia azo atao amin'ny fanoratana amin'ny terminal mitovy (Ctrl + Alt + T):
Aorian'ny fampiharana ny baiko teo aloha dia afaka manao izany isika atombohy ny programa amin'ny fipihana indroa eo amin'ny rakitra na amin'ny alàlan'ny fandehanana amin'ny terminal:
Toy ny snap
Para mametraka ity programa ity toy ny snap pack, tsy maintsy manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) isika ary manatanteraka izany:
Aorian'ny fametrahana ny programa dia afaka manomboka izany amin'ny fitadiavana ny mpandefa ao amin'ny rafitray.
Raha izany no tianao esory ny fonosana snap amin'ity programa ity, sokafy fotsiny ny terminal (Ctrl + Alt + T) ary tanteraho ny baiko ao:
Ampiasao ity programa ity ho fonosana Flatpak, ilaina ny fampandehanana an'ity haitao ity amin'ny fitaovantsika. Raha mampiasa Ubuntu 20.04 ianao, ary mbola tsy manana ireto karazana fonosana ireto dia afaka manohy ianao The Guide fa mpiara-miasa iray no nanoratra tao amin'ity bilaogy ity taloha kelin'izay.
Rehefa afaka mametraka ireo karazana fonosana ireo amin'ny rafitrao ianao, dia afaka manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary mihazakazaka ny mametraka baiko:
Rehefa vita ny fametrahana dia azonao atao atombohy ny programa amin'ny fitadiavana ny mpandefa fandaharana amin'ny solosainao, na amin'ny fanoratana ao amin'ny terminal:
Mba hanesorana ny fonosana Flatpak dia mila manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) fotsiny isika ary manatanteraka ny baiko ao anatiny:
Raha mila fanazavana fanampiny momba ity tetikasa ity, ny mpampiasa dia afaka mandeha any amin'ny tranokalan'ny tetikasa na ny azy tahiry ao amin'ny GitHub.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » QPrompt, Teleprompter loharano malalaka sy malalaka
Niara-niasa tamin'ny The Markup i Mozilla mba hahitana ny fomba fanenjehan'ny Meta ny olona manerana ny tranonkala
Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish dia hampiasa GNOME 42, fa kely GTK4